Posted in tsy misy farany Space . andriamanitra . izao rehetra izao . fitiavana
Ny tontolo izao voarindra na inona na inona, fa angovo. Izany rehetra izany dia tena mameno ny, niova fo, niova fo, kokoa. ankehitriny Энергии самого различного качества. Ny fomba tsotra indrindra mba hizara angovo ny hovitrovitra hatetika. Tao anatin'ny tsirairay matetika hovitrovitra hery Mety ho iray na endrika hafa. Izany dia miteraka zavatra iray hovitrovitra sasany matetika. Zavatra mety ho maro. Hiresaka amin'ny tsirairay, dia manampy mba hanatsarana ny efa misy hovitrovitra hatetika. Toy izany no Angovo mety tena dia iray amin'ireo endrika mahazatra kokoa ny Angovo, misy azy rehetra.
Angovo sy ny zavatra mety ho tena isan-karazany. ohatra, manga na volom-boasary ny Angovo, atomika Energy, Life angovo, fitomboan'ny angovo, Energy kintana na planeta sy ny hafa.
ohatra, naroboka tao amin'ny herin 'ny fitiavana, ianao mbola afaka miditra ao ny herin 'ny fiainana. Toa ny tarehin'ny izao rehetra izao sy ny teraka na inona na inona teo an-toerana Worlds.
Ho an'ny voajanahary fitanan'i ny hery foana fahatsapana Joy. Inona no toetra ara-panahy manokana. fifaliana – torolalana ity, mpanampy sy ny namany rehetra izay niakatra.
Eo amin'izao rehetra izao AYFAAR (ny izao rehetra izao) iray amin'ireo ambony indrindra no toe-fampandrosoana – fitiavana. raha ny zava-manan'aina, nivoatra, tonga firenena Ny fitiavana tsy misy fepetra – afaka hitsangana ambonin'ny izao rehetra izao, ary hifindra amin'ny. Amin'ity tranga ity, tsy misy antony tokony hahazo manokana traikefa amin'ny hafa rehetra izao.
Izao Rehetra Izao ny fisiany dia fifankatiavana sy ny fifaliana. Misy toerana.
Ny teny fiainana teraka indroa:
1) voalohany – hisy.
2) fanindroany – hiaina.
Izany koa dia mihatra amin'ny olombelona karazana Olona novana.
Ny voalohan-teraka dia maneho fiofanana angovo vaovao Fidorohana, in iombonana antsoina hoe fanahy na ny fahatsiarovan-tena.
fahaterahana faharoa – in iray hita vatana ny Worlds, izay mampiasa ny herin 'ny fiainana. Matetika izany dia nanaraka ny fandaminana sy hanome vatana efa misy eo amin'ny tena Enhancement. Rehefa afaka izany, misy fanangonan-karena ny traikefa amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny manodidina, amin'ny alalan'ny zava-misy ny tena.
Amin 'ny farany, raha ny fandehany: Ny hoe ny voalohany dia afaka Misy; fanindroany – velona. Ary mety ho tsara kokoa nankasitraka.
izao rehetra izao.
Nahita ny fahafahana misy, Fahatsiarovan-tena dia vaovao-angovo fananana, tadin amin'ny hatetika iray na ny sasany matetika isan-karazany. Amin 'izany dia manana fananana sasany sy ny fahaiza-manao.
Matetika Angovo mampitombo ny, tanteraka noho ny ambany matetika ho ambony hatetika. Ity dingana ity dia tena ny lavany, ary tsy ny rehetra no ho afaka ny hitombo ny fahatsiarovan-tena. Maro noho ny fahadisoana ny azy sy ny tena manimba simba. Noho izany, ao amin'ny Izao Rehetra Izao nisy krizy AYFAAR.
Mba toa manampy nandamina ny olana noforonina, toy ny herin 'ny Fiainana Energy. Izay namela ny mamorona tontolo mponina ny Olona novana, Fahatsiarovan-tena izay vibrates ao amin'ny isan-karazany samy hafa peo. Ny teboka ny famoronana tontolo izao dia ny fahafahana mora mivelatra kokoa noho ny fahatsiarovan-tena, fa tsy afaka manao irery. Io endri-javatra no nambaran'ny ihany ny zava-misy, fa, eo amin'izany tontolo, ampy ny manaraka ny torohevitra fahatsiarovan-tena mandroso ary lasa eo ambany fanaraha-maso ny. Ankoatra izany, ny mponina rehetra dia manana vatana toy izany koa Functional, izay mahatonga izany azo atao ny haka tahaka ny tena mandroso, ary dia toy izany no mba hanatsara sy handroso fomba iray azo antoka voaporofo.
Fa tsy matotra sy ireo biby, izay efa nesorina ny saina, Izahay nijery ny zava-niseho sy namarana, izay tsy voatery hanana ny drafitry ny Mpahary, satria afaka mampiasa ny mandroso fotsiny manan'aina araka izay mahamety azy, mba hamahana ny olana mahazo azy; mora ny fanaraha-maso rehetra amin'ny vatana ny haavon'ny, ary nanao ezaka mpiara- (na tsirairay) hahatratra handrombaka ary manohy mampiasa araka izay mahamety azy. Raha toa, raha hifarana ny ainy angovo – ampy fotsiny ny hangalatra azy avy amin'ny, izay mbola manana izany. Amin'ny teny hafa, ireo tanora, adaladala, tsy za-draharaha: ireo izay nahatongavako amin'izao tontolo izao ihany vao haingana. A, ka tsy nisy olona nahatsikaritra, ny zava-dehibe indrindra dia tsy ny hanome fotoana sitrana. Noho nahay be halatra biby adala very saro-takarina indrindra ny vatana, ary mbola manana vatana ara-nofo, izay voafetra, sy ny fomba rehetra ny fisian'ny. Satria, noho ny tenany izy ireo toetra tsara foana harodany – ny hany fomba ho azy ireo-piompiana – fanamboarana ity. Tahaka ny efa misy mahasoa mba handresy lahatra ny olon-drehetra izay, fa tsy misy Andriamanitra ary fehezo rehetra amin'ny fiainana biolojika teny, satria ny hany amin'ny teny fisiana. Ary dia toy izany ny krizy stagnation nivadika ho fandaminana fivontosana. Toerana toy izany dia matetika antsoina hoe “habakabaka fivontosana”. Ny olana dia tsotra: rehetra-tapaka fotsiny Cosmic Order. Hamahana izany – ampy mba hamerina ny voajanahary.
Ny endriky ny fivontosana.
Amin'ity tranga ity, fivontosana endrika Maneho lo “lobaka” ao anatiny ilay jiro,, izay mamelona ny ao anatin'ilay mbola velona “takamoa”, ach translate Korn. Izao no hiteraka Linear “takamoa” Tsy tsara noho ny mety ho mbola velona fanjavonana Content “takamoa”, izay mihinana ny tena “fivontosana”. raha “fivontosana” dia fantatra, Ary variana mampiasa ny fiainana toy ny takalon'aina, ho antoka ny ny fisiany, izay ao amin'ny toerana tena azo antoka.
Na fitsaboana azo atao vay? fa, dia ho azo atao, raha “fivontosana” Dia nitolo-batana ho eo an-tanan 'ny dokotera Cosmic. Fa satria izany foana avy manafina azy ireo ary mandositra – angamba, Io fisehoan-javatra toa tsy azo atao.
Ny fivontosana Azo raisina ho toy ny ankizy mifraody, izay mandry eo amin'ny andaniny sy ny ankilany:
1) “Ny votoatin'ny ny velona” dia nandainga Iza moa Andriamanitra ka nanao hoe:, izy Azy.
2) Andriamanitra, hoy izy Nitady, fa “Eny àry! Rehetra te hanao, Inona no mitranga ho azy ireo”.
A mahazatra hosoka, famantarany zavatra afaka efa misy mampiavaka mediocre “fivontosana”.
Life in nijery ny lanitra.
Living in Space, mety, olona iray dia tsy maintsy very ny tenany. zavatra mitranga. aza kivy, raha izany no mitranga. Ny tena manohana ny cosmic firindrana ary manampy azy handresy faritany vaovao sy Space. Fa tsy tokony hampiharihary ny tenany ho tsy mety feno herim-po mamely,, mitondra mankany amin'ny fampitsaharana ny fiainana, na very ny vatana noho ny naivety, na ny adala te hanampy olona, manantena ho lasa toy izany na dia ilaina ho an'ny olona iray, Iza no manadino anao amin'ny indray mipi-maso.
Angamba ianao dia afaka ho lasa mpahay siansa – dia mety ho tsy. Angamba tsy ianao no voalohany – Mety ho eny. Angamba ianao manan-janaka – dia mety ho tsy. Angamba ianao tsy faly – Mety ho eny.
Tsarovy, fa matetika ny ambany-angovo – Tsy ratsy. Be zava-dehibe kokoa dia ny hery anaty, izy ireo dia. Mety ho biodegradable, ary afaka synthesize na hafa. Na dia izany aza, Tsy manimba ny kely.
Matetika monina ankapobeny ny planeta mitovy karazana hovitrovitra. Izany dia manome fahafahana ny mponina hiasa-bokatra ho an'ny fampandrosoana ny, satria, fotsiny, amin'ny akony, bebe kokoa amin 'izany manatanteraka fampandrosoana haingana.
Io dia mamela fomba zanatany sasany mamenoa ny Planet heloka bevava Olona novana, fanesorana foana ny filana ny fonja sy ny traikefa fahasorenana avy eo anatrehan 'lo-peo no mampihovotrovotra.
Eto an-tany eo amin'izao rehetra izao fantatra amin'ny fomba hafa ny “fahafatesana Planet”. Eo amboniny dia misy-peo no mampihovotrovotra ny kalitao samihafa sy ny Zavaboary, mifanaraka ireo hovitrovitra. Fanandramana toy izany dia mitranga tsindraindray.
Tsy manam-petra Izao Rehetra Izao ireo lalàna amin 'ny Kilonga. Izy ireo iray manontolo mihatra tontolo izao voarindra sy ny rehetra, fa (anisan'izany amin'ny teboka tsirairay) na inona na inona ny toerana, karazana matetika, hahaleo, -panjakana lalàna, fivavahana, hametraka izao rehetra izao, na ireo hafa izay manondro. Space dia na aiza na aiza, ary na aiza na aiza no voalohany indrindra.
Tsy misy farany Space an'ny One Brahman, mamorona azy. Ny nisaraka poti-One Brahman – Atman, Izy ireo ihany koa ny Brahman, noho ny fisiana misaraka tsy mandika ny tsy fivadihana tsy manam-petra fahatsiarovan-tena; Maneho endrika hafa ny fanatrehany ao amin'ny habakabaka. Ao amin'ny fanambarana izany dia marina, ny Self – dia iray ihany izany tompony nijery ny lanitra tahaka ny Brahman. Brahman – mpanakanto toerana. Tsy misy afa-tsy ny mpanoratra ny Famoronana mety tsy mahafantatra ny fomba tsara indrindra ny hampivelarana azy. Ao amin'io tena manan-jo milaza fa tsara kokoa ny manao na inona na inona ny isan'ny Safidy, ary koa ny fomba sy ny zavatra maro izay an'ny. Araka ny Lalàna ny fitanana ny angovo fa tsy mandika ny didy, satria ny tena no tena karazana.
toerana – dia tsy mampino lavitra mampino fa misy zavatra tsy manam-petra, foto-kevitra, sombin-kazo eo amin'ny vovoka, teboka. Raha mahita zavatra – hitanao ny fananana manokana tsy manam-petra Izao Rehetra Izao. Raha toa ka mahatsapa ny rivotra – Tsy fananan'ny manokana tsy manam-petra Izao Rehetra Izao. Raha tsy mahita na mahatsapa – izany ihany koa ny fananan'ny manokana tsy manam-petra Izao Rehetra Izao, toa anao. Brahman – tontolo izao voarindra tompony. I Atman – dia mitovy toy ny Brahman. Matetika izany mampahatsiahy, raha nanadino ny momba izany, na mody.
andriamanitra – Firaisan-tsaina dia Holistic.
Alohan'ny ny tena famaritana ny marina rehetra, fa amin'ny zava-misy Mandraka ankehitriny dia nampidina hakitroky.
satria, tsy vonton-ny toe-piainana eo anatrehan'ny tontolo izao voarindra ny tsy manam-petra izany dia afaka miala avy hatrany. Fitondran-tena toy izany dia raisina ho toy ny fanehoana ny faniriana ny ho avy ao nijery ny lanitra. Rehefa dinihina tokoa,, Toy izany toe-tsaina ho any ny fisiana, miaraka amin'ny ny faniriana na ny faniriana mandà ny rehetra fa, izay mitovy amin'ny fangatahana mba hamarana ny fisian'Andriamanitra sy nanjavona avy amin'ny manam-petra Izao Rehetra Izao. To hovonoina ary nanaiky avy hatrany.
Raha misafidy ny mamorona na inona na inona, na hanao – manao izany resaka hatsarana, vola amin'ny famoronana ny rehetra ny fitiavako sy ny tsara indrindra anananao. Satria voalohany indrindra an'ny ahy.
tsy misy farany Space.
Tonga ny fotoana: hitondra any amin'ny famonoana ny didim-pitsarana.
ツ ૐ 卍 Olivet Shanti – Fanatanterahana ♡ ★ ☸
( ( ( toerana ★ Прекрасен ) ) )
Mizaka tena fitsipika fitsipika